Wiil Dhalinyaro ah oo lagu dilay degaan ka tirsan Shabeellaha Hoose | Banaadir Times
HomeUncategorisedWiil Dhalinyaro ah oo lagu dilay degaan ka tirsan Shabeellaha Hoose
Wiil Dhalinyaro ah oo lagu dilay degaan ka tirsan Shabeellaha Hoose
Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in Wiil Dhalinyaro ahaa in uu ku dilay degaanka la yiraahdo Golweyn oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wiilka Dhalinyarada ah ee la dilay oo Magaciisa lagu soo koobay dhurre ayaa ku Shaqeysan jiray Mootada labada lug leh ee Fekonta loo yaqaano, waxana dilkiisa uu yimid, kadib markii ay ku murmeen Askariga oo Wiilka ka dalbaday in uu siiyo lacag uu jaad ama qaad ku gato, hayeeshee uu diiday.
“Dhure wuxuu ahaa Wiil dhalinyaro degaanka u dhashey kana xamaalanaayey mootada laba lugaaleyda ah,askariga ayaa ka dalbadey in uu qaad u qaado,dhure isna wuu ka cudur daartey kadib dharbaaxsho ku dhuftey askariga,dhurana wuu ka aarsadey,askariga ayaa xabad madax kaga dhuftey,sidaas ayuuna ku geeriyoodey dhure ayuu yiri” qof kamid ah dadka degaanka.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku dartayaan in askarigii dilka u geystay Wiilka Dhalinyarada ahaa uu goobta ka baxsaday, hayeeshee laamaha Amniga ay sheegeen inay ku raad joogaan.
Dhowr jeer ayaa sidaan oo kale askar ka tirsan Ciidamada Dowladda waxaa ay Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka ku dileen wadayaasha Mootooyinka noocyadooda kala duwan, waxaana dhacdooyinkaas ay noqdeen kuwo soo laab laabta.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Xasan Sheekh & Madaxweynaha Puntland?
Next articleTaliska Ciidanka xoogga dalka oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab